Na-akpali banyere Islam na Muslim obodo
Ị jụrụ: Kedu ka ndị Alakụba si bụrụ ọkwa mba ndị Alakụba?
Kedu obodo Islam kacha mma n'ụwa? Ọnụ ọgụgụ ndị Alakụba kacha ukwuu na obodo dị na Indonesia, obodo nwere 12.7% nke ndị Alakụba ụwa,…
Kedu nke ziri ezi Eid Al Adha ma ọ bụ Eid ul Adha?
Eid-ul-Adha nwekwara ike ịsụpe ʾId al-Adha ma ọ bụ Eid-ul-Adha. A na-akpọkarị ya ngwa ngwa Eid. Agbanyeghị, Eid nwekwara ike ịtu aka na mmemme ọzọ, Eid-ul-Fitr, nke na-eme na…
Azịza kacha mma: Gịnị ka Islam na-ekwu maka ekele?
Kedu ihe ị na-ekwu mgbe mmadụ toro gị na Islam? Agbanyeghị, ọ bụrụ na mmadụ ga-aja gị mma, kwuo naanị daalụ, gbakwunyere kwuo “alhamdulillah” (otuto niile bụ maka…
Azịza ngwa ngwa: mmanya gbara ụka ọ bụ Halal ka ọ bụ Haram?
Azịza ngwa ngwa: mmanya mmanya na mmanya balsamic ka a na-ewere dị ka Haram n'ihi na ha nwere nnukwu mmanya. A na-ewere ụdị mmanya ndị ọzọ niile dị ka Halal. Ọ bụ…
Ugboro ole ka ọnwa kwuru na Quran?
Quran o kwuru banyere ọnwa? Quran na-ekwusi ike na ọnwa bụ ihe ịrịba ama nke Chineke, ọ bụghị n'onwe ya bụ chi. Gịnị ka Allah kwuru gbasara ọnwa?…
Kedu ọganihu nke afọ ọla edo nke Islam dugara?
Ndị ọkà mmụta sayensị kwalitere ngalaba nke algebra, calculus, geometry, chemistry, bayoloji, ọgwụ na mbara igwe. Ọtụtụ ụdị nka na-eto eto n'oge Islam Golden Age, gụnyere ceramics, metalwork, textiles, unlighted…
Nizams bụ Shia ka ọ bụ Sunni?
Ọ bụ ezie na Asaf Jahs (Nizams), ndị ọchịchị nke Hyderabad State oge ochie, bụ ndị Alakụba Sunni, ha nọgidere na-akwado ememe Muharram. Ọ bụ n'oge ha ka ógbè pụrụ iche…
Ajụjụ gị: Gịnị kpatara na Kaaba abụghị arụsị?
Anyị ndị Alakụba anaghị efe arụsị na Mecca. Anyị anaghị akpọ ya arụsị ọbụna. Ọ bụ nkume onye amuma Mohammed webatara na Mecca ebumnuche bụ isi…
Azịza ọsọ ọsọ: Kedu ihe Quran na-ekwu maka ikike nwunye?
Na nsọ Quran (SWT) Allah ekwuwo maka ikike nke inye nwunye. “Na-enyekwa ụmụ nwanyị ego ha dị ka onyinye. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ha bụ…
Ajụjụ a na-ajụkarị: Kedu ndị isi abụọ lụrụ ọgụ iji weghara obodo nsọ Mecca n'aka ndị Ottoman na 1803?
Ha bilitere dị ka òtù okpukperechi na Dira'iyya na Nejd na 1744-1745. Ozizi ha chọtara ndị na-akwado ya ole na ole na Hejaz, na Mufti nke Mecca kwuru…
1 2 ... 837 Osote
ụbọchị ọma niile! Aha m bụ Amir. Nke a bụ blọgụ m gbasara Islam na ụwa islam. Blọọgụ m ga-enwe akụkọ gbasara Islam site n'echiche okpukperechi, yana site na echiche nke sayensị ndị ọzọ dị ka ọmụmụ okpukperechi, sociology, ọmụmụ omenala, linguistics, wdg, wdg.
Enwere m ike ịchọ ụlọ m mma maka Ramadan?
Kedu ka Bank Islam si eji DuitNow?
Kedu ihe na-eme ụlọ alakụba ka ọ bụrụ alakụba?
Kedu ihe na-ebute mgbasa ozi Islam ngwa ngwa?
Gịnị bụ ngalaba abụọ nke Islam?
Ịzụta tiketi lọtrị ọ bụ Haram na Islam?
Azịza kachasị mma: Ị ga-eyi hijab ma ọ bụrụ na isi nkwọcha gị?
© 2022 ọgbakọ ndị Alakụba
Ntị maka ndị ejidere aka nri! Ihe niile ezigara na saịtị ahụ bụ nke ọma maka ebumnuche ozi na agụmakwụkwọ! Ọ bụrụ na ị chere na ikesa ihe ọ bụla na-emebi ikike nwebisiinka gị, jide n'aka na ị ga-akpọtụrụ anyị site na ụdị kọntaktị na a ga-ewepụ ihe gị!